Lohman Brown: àgwà, nlekọta, ozuzu - Ugbo ala ugbo - 2019
Lohman Brown: àgwà, nlekọta, ozuzu
Ulo oru ugbo taa na-enye otutu umu ulo ozuzu, karia ogwu.
Otu n'ime ụdị ọkụkọ ndị a bụ Lohman Brown, nke ga-aju ndị nwe ya anya nke ukwuu na ọnọdụ adịghị ndụ.
Ọnọdụ maka ọdịnaya
Uru na ọghọm nke ụdị
Chickens Lohman Brown - bụ ọrụ nke ndị ọrụ Germany na-azụ oge maka mkpochapụ nke ụmụ anụmanụ na-enweghị atụ.
N'afọ 1970, Lohmann Tierzucht GmbH na Germany nwetara ụdị ọhụrụ nke sitere na ụdị dị iche iche dị iche iche, dịka Rhode Island na Plymouthrock dị iche iche.
Ọ dị mkpa! Lohman Brown na-ezo aka n'osisi hens, ya bụ, ụdị ndị a na-enweta site na ịzụlite na ịgafe ọtụtụ ụdị anumanu.
N'ihe banyere àgwà ha, anụ ọkụkụ Lehman Brown bụ anụ na ụdị akwa, na-arụpụta nke ọma ma na-emegharị n'ọnọdụ ọnọdụ ihu igwe ọ bụla. Kwesịrị ekwesị maka ozuzu onwe ha nakwa maka ugbo anụ ọkụkọ, ha na-enwe ahụ iru ala na mbara igwe.
Ha na-enwe enyi na enyi, soro ndị ọzọ nọ n'ezinụlọ na-emekọrịta ihe ma nwee mmetụta na-adịghị mma.
Mụta banyere anụ ndị na-ewu ewu na ụdị ụmụ ọkụkọ nke ọkụkọ, ọdịdị ha na ọghọm ha.
Ị nwere ike inweta ọ bụghị naanị àkwá, kamakwa anụ sitere n'ìgwè a, dị ka ndị na-anụ ọkụkọ rutere n'arọ 3, na ọkụkọ - 2 n'arọ. Ọ na-adọrọ mmasị na site na ụbọchị mbụ ọ ga-ekwe omume ịmata ọdịiche dị n'etiti ọkụkọ na akịkọ, ebe ọ bụ na mbụ bụ aja aja, aja aja ma ọ bụ ọbara ọbara, ndị nke ikpeazụ ahụ na-acha ọcha.
Nnụnụ nwere ahụ mepụtara na oke obosara na nku ndị dị nso. Ma ihe kachasị mkpa - ha nwere ntakịrị agụụ na obere mkpa maka nri.
Ugbua izu iri ka a mụsịrị ha, ndị hens nke Loman Brown dị njikere idobe nsen. Otu nne okuko nwere ike iburu nnu 330 n'oge oge na-emeghị eme, nke dị ihe dị ka izu 80. 1 egg na-erukwa ihe dịka 60-65g, na -agbanye nnukwu ụba nke agba aja aja. Ọnụ ọgụgụ kasị elu mepụtara akụkọ maka izu 25-30.
Ị ma? A na-achọrọ oké ọkpa n'ìgwè atụrụ ọ bụghị naanị maka ọdịdị nwa. Ọrụ ya gụnyere ijikwa edemede ụtụtụ, nkwụsị esemokwu, ịkpọ maka nri na nsị.
Dịka e kwuru n'elu, ụdị a dị oke egwu maka ọnọdụ ejidere ya, ọ ga-adị ndụ na obere ụlọ, a na-emegharị maka oyi oyi.
Maka ndị na-abụghị ndị na-abịaghị, ọ dị mkpa ịmepụta ọnọdụ ndụ dị mma maka nnụnụ ahụ, na-echeba anụ ụlọ ha:
ugbo ga-enwe akwu nke ya, inye nri mmiri, ịṅụ mmanya maka ihe ọ bụla;
ebe zuru oke maka ije ije n'èzí nakwa n'ime ụlọ;
igwe okpomọkụ bụ +15 - + 18 Celsius;
iru mmiri nke 50-70%, ebe ọ bụ na ala akọrọ na ikuku iru ala na-eme ka ọdịdị nke ọrịa na nnụnụ pụta;
ekwesịrị ikpo ọkụkọ ọkụkọ n'oge oge oyi, windo kpuchie ya na foil, a na-atụkwa hay ma ọ bụ ahịhịa na ala;
gbochie drafts n'ime ụlọ ahụ;
enwere ventilashị ma ọ bụ ikuku ikuku.
Hụkwa iwu maka inye nri na idebe hens.
Ọ dị mkpa maka usoro na usoro ụbọchị. A na-ahapụ ha n'ime ụlọ ahụ n'isi, n'ihe dị ka elekere ise nke ụtụtụ, na elekere iri na itoolu ka a ga-akwusi ike ma gbanyụọ ọkụ. Mgbe ị na-eje ije, ị ga-ehicha ụlọ ahụ na ndị na-azụ nri iji zere mmepe nke nje bacteria na-emerụ ahụ.
Izu abụọ mgbe a mụsịrị nwa, a na-eri nri ọkụkọ nwere nri pụrụ iche nke nwere vitamin ndị dị mkpa, ihe mgbakwunye mineral, carbohydrates na protein.
Ọ ga-aba uru maka ị mụta otu esi edozi nri n'ụzọ kwesịrị ekwesị na otu esi eche nri ọkụkọ gị.
Maka ndị okenye, menu dị ọtụtụ:
mkpụrụ ọka ndị ọzọ ma ọ bụ ọka germinated;
esi nri sie nri, dị ka poteto na carrots;
ájá na ajịrịja;
Ọ dị mkpa! Efefela ọnụego kwa ụbọchị maka ọkụkọ na ọkụ 110-115 g kwa ụbọchị, n'ihi na nke a nwere ike ibute ọrịa.
Mgbe ikpochapu ọkụkọ n'ụtụtụ, a na-enye ha nri mgbe awa atọ gachara, nri ga-ezu maka nri ụtụtụ nkeji iri anọ. Nri ọzọ na-elekere elekere atọ na elekere elekere elekere atọ n'ehihie ma lee ebe ị na-eri nri ehihie maka awa 1-1.5.
Ihe kachasị dị iche iche nke hens a bụ enweghị ike ịmị mkpụrụ na ụdị ndị nne na nna. Nke a bụ n'ihi ịnweta ụdị nke ụdị ihe dị iche iche. Ya mere, mkpụrụ ndị na-esote ga-enwe ọdịiche dị iche iche nke ụdị ọkụkọ anọ a. Ị nwere ike ịnwa idebe ihe ịrịba ama nke ụdị Lohman Brown, ọkụkọ ndị a ga-abụ otu na nkọwa ahụ dị n'elu, ma maka nke a, ịkwesịrị ịmepụta ọnọdụ pụrụ iche ma dị mma.
Isi uru nke ụdị gụnyere:
nnukwu uru ị na-edebe, na obere ụgwọ maka nchekwa na nri, ị nwere ike nweta otutu nsen maka ire ere;
ọkụkọ ngwa ngwa banye afọ hens, ugbua na 135-140 ụbọchị;
nnukwu onu ogugu ndi mmadu nwere onu ogugu ndu ihe dika 98%;
ihe nlebara anya nke nnụnụ na ọnọdụ nke njide na ọnọdụ okpomọkụ;
nnukwu ogo nke chicks bụ ihe dịka 80%.
Ma e nwere ihe ndọghachi azụ, ọ bụ ezie na ha anaghị emetụta ụdị ndị a:
enweghị ike ịmị mkpụrụ nwere otu ihe dị na nne;
emepụta mkpụrụ nke nne nne okuko bụ nanị izu 80 na mgbe nke ahụ gasịrị, ọ na-adaba n'ụzọ dị nro, nke mere na n'oge a, ọ bụ naanị maka anụ.
Ị ma? Ọ bụ ezie na a maara aha ọkụkọ ahụ dị ka ụmụ nnụnụ nzuzu, mana ha nwere ike ịmata ọdịiche dị iche iche na 100 dị iche iche, chọpụta onye ọbịa ahụ site n'ebe dị anya nke 10 m ma zuru oke na oge.
Mgbe ị na-ahọrọ ụdị ụbụrụ Lohman Brown n'ihi na ị na-etolite, ị nwere ike ijide n'aka na ị ga-arụ ọrụ dị mma na ezi ndụ.
Kedu ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na orchid enyewo oge ịse ihe na steam, na otu esi elekọta ụmụaka nke osisi ahụ?
Kedu ihe dị mfe iji merie ọrịa yucca? Gịnị mere epupụta nke nkwụ nkwụ ji acha odo odo, akọrọ ma daa?
Super n'oge ngwakọ - tomato "Snowman" f1: nkọwa na foto
Copyright 2019 \_ Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa \_ Lohman Brown: àgwà, nlekọta, ozuzu